माघे सङ्क्रान्तिको महत्व | मझेरी डट कम
Trichandra — Tue, 01/21/2014 - 23:28
युवामन्च २०७० माघ
नेपाली समाजमा प्रचलित कुनै पनि किसिमको चाड पर्वका परम्परामा धर्म र संस्कृतिको विविध पक्ष अन्तर्निहित रहेको हुन्छ । भौगोलिक, जातीय र सांस्कृतिक विविधता रहेको नेपालमा एकैदिन पर्ने र एउटै नामको पर्वलाई पनि भिन्नभिन्न भेग र समुदायमा भिन्नभिन्न ढङ्गले मनाउने प्रचलन रहीआएको छ । माघ महिनाको सुरुवातको दिन अर्थात् माघ १ गतेको दिन मनाइने ‘माघे सङ्र्क्रान्ति’ पर्वलाई ‘मकर सङ्क्रान्ति’ को नामले चिनिन्छ ।
मकर सङ्क्रान्ति नेपालको किराँती संस्कृतिबाट प्रतिपादन गरिएको संस्कार हो । यसमा किराँती राजा शक्को हाङ्गको नाम जोडिएको पाइन्छ । राजा शक्को हाङ्गको नामबाटै शत्रमूल नदीको नामाकरण भएको प्राचीन कथन छ । यसदिन शत्रमूलमा समेत ठूलो मेला लाग्दछ ।
ज्योतिषीय दृष्टिकोणमा सूर्य धनु राशीबाट मकर राशीमा प्रवेश गर्ने र यसै दिनदेखि सूर्यको उदय दक्षिणतर्फबाट उत्तरतर्फ प्रवेश गर्ने क्रम आरम्भ हुने गर्दछन् । उत्तरायणको अवधिमा तुलनात्मक रुपमा दिन लामो हुने र तापक्रममा समेत वृद्धि भई गर्मी मौसमको प्रारम्भ हुने गर्दछ ।
नेपालको समस्त भूभाग हिमाल पहाड र तराईमा बसोबास गर्ने क्षेत्री, बाहुन, राई, लिम्बु, नेवार, गुरुङ्ग, तामाङ, मगर आदि सबै जनजातीले माघे सङ्क्रान्तिलाई आ–आफ्नो परम्परा, भिन्नभिन्न विशेषता र प्रकृतिले मनाउने गरेको पाइन्छ ।
घिउ, चाकु, तरुल, तिलको लड्डु जस्को पौष्टिक खाद्य पदार्थ खाएर मुलुकभर माघे सङ्क्रान्ति पर्व मनाइन्छ भने नेवार समुदायमा भने ती खाद्यवस्तु साथै समय्बजी (चिउरा, पोलेको मासु, साधेंको भटमास, अदुवा र रक्सी वा जाँड)का साथै सिद्रा माछा खाने चलन छ । विशेषगरी घिउ र चाकु खाने भएकोले नेपाल भाषा (नेवारी)मा ‘घ्यो चाकु सँल्हु’ भनिने यस पर्वमा उपत्यकाका तीन सहरमा खिचडीका साथै ‘यलय् पलः’ (पाटने पालुङ्ग) खाने चलन रहिआएको छ । यस दिन जीउभरि तेल घसेर घाम ताप्ने पनि चलनका साथै यस पर्वमा परिवारमा मूली वा आमाले छोराछोरीलाई तालुमा तेल हालिदिने प्रचलन पनि छ । यसै दिन भक्तपुरको टौमढी टोलमा तिलमाधव नारायणको मन्दिरमा मेला लाग्ने र दीपङ्कर बुद्धको पूजा हुने गर्दछ । तिलमाधव नारायणको मन्दिरमा चढाइएको घिउ सन्तान नभएका महिलाले नुहाइधुवाई गरी शुद्ध भई खाएमा सन्तान प्राप्ति हुने विश्वास गरिन्छ । त्यस्तै उपत्यका नजिकैको काभ्रे, पनौतीमा पनि माघ महिनाभरि मकर मेला लाग्छ भने बाह्र वर्षमा एकपल्ट महिनाभरि बाह्र वर्षे मेला समेत यहाँ लाग्ने गर्दछ ।
विभिन्न स्थानमा मनाइने माघे सङ्क्रान्ति
माघे सङ्क्रान्तिको दिन नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको विभिन्न नदी, घाटका किनार एवं दोभान र त्रिवेणीहरूमा स्नान गर्नेहरूको भीड हुने गर्दछ ।
यस दिन इलाम जिल्लाको माईबेनीमा ठूलो मेला लाग्छ । माईखोला र जोगमाई खोलाको दोभानमा लाग्ने उक्त मेलामा हजारौं भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गर्दछ भने सो मेलामा धाननाच, चण्डीनाच, बालन, संगिनी, मारुनी नाच जस्ता परम्परागत नृत्य समेत हेर्न पाइन्छ ।
यसैगरी, यसदिन झापाको प्रसिद्ध धार्मिक नदी कन्काईमा हिन्दू धर्मावलम्बीले मकर स्नान गर्छन् । सङ्क्रान्तिदेखि पाँचदिनसम्म कन्काई नदीको वरिपरि रमाइलो मेला लाग्ने र किराँत परम्परा एवं संस्कृति अनुरुप धान नाच देखाइने प्रचलन छ । उता सुनसरी जिल्लाको प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल बराहक्षेत्रमा माघे सङ्क्रान्तिका दिन हजारौं हिन्दू धर्मावलम्बीको भगवान विष्णुको पूजा आराधना गर्छन् । हिन्दू धार्मिक विश्वासका आधारमा उक्त स्थानमा त्यसदिन मकर नुहाई शरीर स्वच्छ बनाएर मोक्ष पाउने विश्वास गरिन्छ ।
तराई जिल्लाका मैथिली समूदायले यसलाई ‘तिला सङ्क्रान्ति’ को रुपमा मनाउँछन् । उनीहरू यस पर्वलाई बाचा वन्धनको रुपमा समेत मनाउने गरेको पाइन्छ, यसदिन परिवारका अग्रज र आमा–बाबुले आफ्ना सन्तानहरूलाई सख्खर र तिलको लड्डु खुवाई उनीहरूबाट बुढेसकालमा सेवा गर्नुपर्ने वचन, बाचालिन लगाउने गर्दछन् ।
यस्तै हरेक बाह्र वर्षमा एकपटक स्वयम्भूको भुँइखेलमा दीपङ्कर बुद्धको जात्रा समेत हुने गर्दछ । यसलाई बौद्ध धर्मालम्बिहरूले सम्यक पूजा भनिन्छ ।
खासगरी मैथिली महिलाका लागि ‘तिला सङ्क्रान्ति’ पर्वको अँझ बढी महत्व छ । यसै दिनदेखि कन्याहरू सुयोग्य वर प्राप्तिको कामनाले तुसारी पर्व मनाउन थाल्छन् भने विवाहित महिला पृथ्वी पर्व मनाउने गर्छन् । यस पर्वमा नवविवाहित दुलहाको घरबाट दुलहीको माइतमा तिल र चिउराको कोसेली र जाडोमा लगाउने लुगा पठाई दिने परम्परा पनि छ । धेरैजसो मिथिलावासी यसै दिनदेखि माघ स्नान सुरु गर्छन्, अर्थात् माघ महिनाभर एका बिहानै नुहाएर घिउ, खिचडी खाने गर्दछन् ।
तराईमा बसोबास गर्ने थारु समुदायले माघी पर्व मनाउँछन् र नयाँ वर्षको रुपमा मान्ने गर्छन् । माघी मौलिक संस्कृतिले भरिएको सबभन्दा ठूलो पर्वको रुपमा लिइन्छ । यो पर्व बडो धुमधाम र उत्साहका साथ मनाइन्छ । यस दिन मासको दाल र चामल मिसाइएको खिचडी (माघी) खाने चलन छ । उनीहरू माघे सङ्क्रान्तिका अघिल्लो दिन सुँगुर काट्ने चलन छ, यसलाई ‘जिता मरना दिन’ भनिन्छ भने सङ्क्रान्तिको रातभर गाउने गीतलाई ‘धमार’ भनिन्छ । माघको दोस्रो दिन खिचडी बनाई खाने गरिन्छ यसलाई उनीहरू ‘खिचरहवा’ भनिन्छ ।
पश्चिममा चर्चित माघे सङ्क्रान्ति मेला रिडीको रुरु क्षेत्रमा तीन दिनसम्म भव्य मेला लाग्ने गर्दछ । हजारौं संख्यामा भक्तजनहरूको भेला हुने उक्त मेला जेठी, माईली र कान्छी सङ्क्रान्तिको रुपमा तीन दिन मनाइने गरेको छ । ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण तानसेनदेखि ३६ किलोमीटर दक्षिण पश्चिम पर्ने गुल्मी, पाल्पा र स्याङ्जा जिल्लाको संगमस्थलबाट बग्ने पवित्र कालीगण्डकी नदी र गण्डकीको तिरमा अवस्थित पुरानो हृषिकेशव मन्दिरमा मेला लाग्ने गर्दछ । सोह्रौ शताव्दीका राजा मणिमुकुन्द सेनले कालीगण्डकीमा स्नान गर्दा भगवान ऋृषिकेशवको मूर्ति फेला परेको र सोही मूर्तिलाई प्रतिस्थापन गरेको भन्ने किवदन्तिरहिआएको छ । काली नदीमा स्नान गरेर ऋषिकेशवको मूर्तिलाई दर्शन गरियो भने मनले चिताएको पुग्ने धारण छ । सो दिन स्याङ्जा र गुल्मी जिल्लाको सेती खोला र कालीगण्डकी नदीको तिरमा (एशियाकै सबैभन्दा ठूलो मानिएको शालिग्राम) शिला रहेको मोदी वेणीघाटमा समेत बिहानैदेखि स्नान गर्नेहरूको ठूलो भीड हुने गर्दछ ।
यता चितवनको देवघाटमा हरेक वर्ष माघ १ गते लाग्ने मकर सङ्क्रान्ति मेला बाँसको लिंगो गाडेर शुभारम्भ गरिन्छ । भारतको हरिद्वार हृषिकेशको तुलनामा निकै मनोरम र ठूलो महत्व बोकेको देवघाटको माघे सङ्क्रान्तिमा स्नान गर्न स्वर्गबाट देवताहरू आउने जनविश्वास छ । धार्मिक र पर्यटकीय महत्व बोकेको देवघाटमा तीन दिन मेला लाग्छ भने मेलासँगै गलेश्वर आश्रममा लक्ष्यहवन समेत गरिन्छ ।
माघी पर्वलाई नयाँ वर्षको रुपमा पनि लिने गरिन्छ । पुस मसान्तमा आ–आफ्नो लेनदेन, हर–हिसाब चुक्ता गर्ने र माघ १ गतेदेखि नयाँ हिसाब किताब सुरु गर्ने प्रचलन छ । यसैबेला घरपरिवारभित्र होस् वा गाउँ समुदायमा आगामी वर्षको लागि खेतीपाती लगायत यावत् अन्य व्यवहारहरूको नवीकरण गरिन्छ । उता थारु समुदायमा भाइ भाइमा मन नमिले माघीमा नै अशंवण्डा गर्ने गरिन्छ । यसलाई घर फुटाई भनिन्छ । अंशवण्डामा कुनै भाइलाई मर्का नपरोस. भन्ने उद्देश्यले गाउँका पञ्च भलादमीको मध्यस्थकर्ताको रुपमा माघको पहिलो हप्ता भित्रै वैठक बसेर सामूहिक रुपमा गत वर्षको काम कारवाही बारे छलफल गरिन्छ । आगामी वर्षको लागि उही बरघरलाई निरन्तरता दिने या नयाँ चुन्ने विषयमा छलफल हुन्छ । नियम उल्लघंन गर्नेलाई बरघरको अध्यक्षतामा बसेको वैठकले जरिवाना तोक्दछ । बरघरको महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै विगत केही वर्षयता जिल्ला बरघर समिति पनि गठन हुन थालेको छ । यसरी लोकतान्त्रिक ढङ्गले थारु समूदायमा अगुवा चुन्ने काम माघीमा नै गरिन्छ ।
माघे सङ्क्रान्तिको दिन नुवाकोट जिल्ला तारुका गाविसमा आयोजना गरिने गोरु जात्रा (गोरु जुधाई) परम्परागत जात्रा हो । बझाङ्गी राजा जयपृथ्वीबहादुर सिंह तारुकास्थित मामाघर जाँदा उनलाई मनोरञ्जन दिलाउन गोरु जुधाई मेलाको सुरुवात गरिएको किम्बदन्ती छ । भनिन्छ जयपृंथ्वीबहादुर सिंह वि.सं. १९७८मा नुवाकोटको तारुका ५ चन्दनीस्थित मामाघर आउँदा भानिजलाई मनोरञ्जन दिन उनका मावलीले बाजागाजासहित साँढे जुधाउने परम्परा आयोजना गराएको थियो ।
विगतमा सोही गाविसको कोलडाँडा, चन्दनी, ठूलो पोखरीलगायतका ठाउँमा छरिएर रहेको गोरु जुधाईलाई विगत पाँच छ वर्षदेखि तारुका चन्दनीमा एकीकृत र व्यवस्थित रुपमा मनाउन थालिएको हो ।
समष्टिगत रुपमा भन्नुपर्दा नेपालमा मनाइने सङ्क्रान्तिमध्ये आध्यात्मिक र भौतिक दृष्टिले समेत सबभन्दा महत्वपूर्ण संस्कृति मकर सङ्क्रान्ति हुनुका साथै किराँतकालीन संस्कृति भएकाले यसको संस्कारमा भौगोलिक, भौतिक, आध्यात्मिकसँगै धार्मिक संस्कृति पाइन्छ ।
करायौ कि मेरी सानु
पूजाका फूलको जोरजाम
बाटो हिड्दा फुर्छ मुक्तक
समुन्द्र त्यो उर्ली आयो किनारमा के छ त्यस्तो
तिम्रो आँसु बन्यो कि भेल
मूर्तिमा विश्वास नगर्ने स्रष्टा
पोखराकी एउटी परी
कति दियौ पीडाहरू मैले गन्न बाँकी थियो
साक्षी राखेर आँसुलाई
मेरो मायाको जिम्दारी खोसिएको पत्तै पाइन
एक हुल साँढेहरू !
फलाम होइन मेरो माया